Igumbi w. Ukubuka kolwandle ngokwengxenye, ukugeza kwangasese kanye nethala - I-Airbnb
Igumbi w. Ukubuka kolwandle ngokwengxenye, ukugeza kwangasese kanye nethala
Sitges, Catalonia, i-Spain
Ikamelo e-iyunithi yokuqasha ibungazwe ngu-Basty
I-wifi esheshayo engu-511 Mbps, kanye nendawo yokusebenzela ekamelweni.
U-Basty Ungumbungazi ovelele
I-inthanethi enesivinini esikhulu / i-comfy double boxspring bed / heater / fan / bathroom siqu / ithala lakho
Izitabane ezinobungane, umsingathi ukhuluma isiJalimane, isiNgisi neSpanishi.
I-12 qm / 3rd floor ngaphandle kwekheshi / Ikhofi, itiye lifakiwe / Ikhishi lokwabelana /
I-12 sqm / 3rd floor ngaphandle kwekheshi / ikhofi, itiye lifakiwe / ikhishi elabelwe / igumbi lokugezela langasese / ithala langasese
I-Cam, i-Double Bedroom enelanga efulethini lase-mediterranean eline-Private en-suite Bathroom kanye nethala elizimele. Iheater, Ifeni, Amathawula ahlanzekile anikeziwe kanye ne-Wi-Fi.
Kukhona umbhede ophindwe kabili ekamelweni one-locker kanye ne-wardrobe, ithala lakho elinelanga usuku lonke kanye nendlu yokugezela yangasese eneshawa nokomisa izinwele. Igumbi linefeni ehlobo kanye nenqaba yokushisa ebusika.
Ikhishi elokuhlanganyela kodwa lihlome ngokugcwele ngohhavini, i-microwave, ifriji, ifriji, umshini wekhofi (amaphedi), i-toaster kanye nebhayela yamanzi. Ngakho indawo yokudlela enkulu.
Itholakala phakathi kwezindawo ezaziwa kakhulu e-Sitges, ethule kodwa iseduze kakhulu nazo zonke izitolo, amabha, ama-disco nezindawo zokudlela, ujantshi wesitimela nesiteshi samabhasi. Umzuzu owodwa nje uhamba ngezinyawo ukuya olwandle !!
Uma unemibuzo ungangabazi ukuxhumana nami. Kungaba intokozo kimina ukuba umbungazi wakho ukuze uthole okuhlangenwe nakho okuhle kwamaholide.
Igumbi elithulile, libalele futhi lihlanzekile efulethini laseMedithera elinethala elikhulu, elizimele nendawo yokugezela yangasese.
Igumbi linombhede ophindwe kabili onekhabethe kanye ne-cloakroom, ithala elizimele elinelanga usuku lonke kanye nendlu yokugezela yangasese eneshawa, okomisa izinwele namathawula. Igumbi libuye libe nesiphephetha-moya sasehlobo kanye ne-heater yasebusika.
Ikhishi lizokwabelwa umninikhaya kodwa lihlome ngokuphelele ngohhavini, i-microwave, ifriji nesiqandisi, umshini wekhofi (amaphedi), i-toaster neketela. Kukhona nendawo yokudlela enkulu etholakalayo.
Itholakala kwesinye sezifunda ezidume kakhulu e-Sitges, endaweni ethule kodwa eseduze kakhulu nazo zonke izitolo, amabha, ama-disco nezindawo zokudlela kanye nesitimela nesiteshi samabhasi. Ulwandle oluseduze lungafinyelelwa ngomzuzu ongu-1 nje ngezinyawo!
Uma unemibuzo, sicela ungangabazi ukuxhumana nami. Ngingajabula ukusingatha okuhlangenwe nakho kweholide engingasoze ngakukhohlwa.
I-wifi esheshayo – 511 Mbps
4.89 · 267 okushiwo abanye
UBasty Ungumbungazi ovelele